A Solo Fly...
Flying for daily bread...
Born to fly...
Flying to rest, Resting to fly...
Posted by ညီလင်းသစ် au 2.11.08
I just wake up and takearest on your blog, feeling nice shoots, to fly to the office soon.
I came here yesterday, but connection was terriably slow.
Once, I had tried to take pictures like your pictures. It's soo peaceful to see.
Thanks Ko Nyi Linn Thit.
November 4, 2008 at 1:31 AM
ညီလင်းရေ.. ဓာတ်ပုံမှ ဟုတ်ရဲ့လားလို့ ခံစားရတယ်။ သိပ်ငြိမ်ပြီး ကြည်လွန်းလို့..ပြီးတော့ artistic ဖြစ်လွန်းလို့ ပန်းချီ effect တွေများ ပါသလားထင်ရတယ်။ တကယ့်ကို cheers !!!!
အမမေငြိမ်း...ကျနော်ရိုက်တတ်လို့ မဟုတ်ပါဘူး၊ အဲဒီ နေ့ကရှုခင်းနဲ့ အလင်းအမှောင်ကိုက ကောင်းလွန်းနေခဲ့ တာပါ၊ အပေါ်ဆုံးတစ်ပုံက နဲနဲမှောင်သွားလို့ အလင်း နဲနဲ ပြန်ထည့်ထားတာကလွဲရင် ဘာ effect မှမသုံးဖြစ် ပါဘူးခင်ဗျာ၊ အားလုံး သဘာဝအတိုင်းပါပဲ၊ အမဆီက cheers ကိုတန်ဖိုးထားပါတယ်၊ ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ...။
ညီမ SMNTL ရေ...Thank you ပါဗျာ။
ဒီဓာတ်ပုံတွေကြည့်ပြီး ယောနသန် စင်ရော်က ခေါင်းထဲ ရောက်လာတယ်။
ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ ပေးထားတဲ့ နာမည်ကလဲ လိုက်ဖက် ညီပါပေ့ရှင်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မမေဓာဝီရေ...၊ ကွန်မန့်တွေ အများကြီး ထားသွားတာ တွေ့တယ်၊း)
Reminds me of Innlay :)
ဒီပုံတွေ ညီမ တော်တော်နှစ်သက်တယ်။
အပေါ်ဆုံးပုံရယ်၊ အောက်ဆုံးပုံရယ် တော်တော်ကြိုက်တယ်။
နောက်ခံ ဘက်ဂရောင်းမှာ အဖြူရောင် ငှက်ကလေးတွေ....ဟားးးး...တကယ် လှတယ်...။
အဲသလို အရောင်တွဲနေတာတွေ တကယ်သဘောကျတယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ညီမသူသူရေ...။း)
ရေ...ပြီးတော့ ရေ...ပြီးတော့ ရေ
ရေ (a) Water (a) De l'eau